Muxuu noqon karaa dagaalka xiga ee Mareykanka iyo Shiinaha? | Goojacade
Home War Muxuu noqon karaa dagaalka xiga ee Mareykanka iyo Shiinaha?
Muxuu noqon karaa dagaalka xiga ee Mareykanka iyo Shiinaha?
Haddii heshiis laga gaaro loollanka dhinaca ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha, waxay u badan tahay in wali uusan dhammaanin hardanka u dhaxeeya labadan dal ee dunida ugu waaweyn dhinaca dhaqaalaha iyo milatariga.
Labada dhinacba waxay sannadihii lasoo dhaafay si adag ugu dagaallameen dhinaca ganacsiga, waxaana ka dhashay khasaare xoog leh oo soo gaaray dhaqaalaha caalamka.
Hase yeeshee, dad badan ayaa sheegaya in hardanka ka dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha uu salka ku hayo wax ka weyn ganacsi, oo labadan dal ay ku loollamayaan awoodda dunida.
Haddii heshiis laga galo dagaalka ganacsiga ama haddii aan laga galinba, waxaa la filayaa in uu sii xoogeysan doono dagaalka ka dhaxeeya labadan waddan ee kala aragtida duwan.
“Waxaan dhex galnay xaalad cusub, waxaana sii xoogeystay tartanka Mareykanka iyo Shiinaha, haddana wuxuu gaaray heer ka sarreeya halkii uu horay u taagnaa”, waxaa sidaas yidhi Michael Hirson oo qaaradda Aasiya agaasime uga ah shirkadda lagu magacaabo Eurasia Group.
“Heshiiska ganacsiga wuxuu ku ekaan doonaa hal dhinac oo ah tartanka dhinaca awoodda ee Shiinaha iyo Mareykanka, balse waa mid ku meel gaar ah oo kaliya, saameyntiisuna way xaddidan tahay”, ayuu yidhi.
Dagaalka xiga ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Shiinaha wuxuu u wareegi karaa tartanka dhinaca tiknoolojiyadda, waxayna dadka arrimahan falanqeeya sheegayaan in labada dhinacba ay doonayaan in mid waliba uu noqdo kan ugu awoodda badan oo hoggaamiya tiknoolojiyadda caalamka.
Qodobbada la xiriira tiknoolojiyadda waxay aasaas u ahaayeen wadahadalladii u dhaxeeyay labadan dal ee socday bilihii lasoo dhaafay.
“Waddan walba wuxuu hadda ogaaday in tiknoolojiyadda ay saldhig u tahay hormarinta barwaaqada, dhaqaalaha, iyo waliba cududda milatariga”, ayuu yidhi Stephen Olson oo ka mid ah aqoonyahannada cilmi barista dhinaca dhaqaalaha ka sameeya hay’adda Hinrich Foundation.
Dagaalka dhinaca tiknoolojiyadda
Dad badan ayaa aaminsan in dagaalka dhinaca tiknoolojiyadda ee Mareykanka iyo Shiinaha uu haddaba socdo, ayna udub dhexaad u tahay shirkadda tiknoolojiyadda ee Huawei, oo laga leeyahay Shiinaha.
Huawei ayaa loo arkaa inay saldhig u tahay dagaalka dhinaca tiknoolojiyadda ee Mareykanka iyo Shiinaha
Huawei oo ka mid ah shirkadaha tiknoolojiyadda ee ugu waaweyn dalka Shiinaha ayaa in dhawaaleba bartilmaameed u ahayd Mareykanka iyo waddamo kale, waxayna shaki badan oo dhinaca amniga ah ka muujiyeen qalabka ay soo saarto.
Mareykanka wuxuu gobollada dalkiisa si buuxda uga mamnuucay inay qalab ka iibsadaan shirkadda Huawei, wuxuuna dalalka xulafada la ah ku dhiirrigaliyay inay sidaas oo kale sameeyaan.
Waxaa shirkaddan lagu tuhmay in adeegyadeeda ay ku dheehdo qalab wax basaasa oo xog u gudbiya sirdoonka Shiinaha.
Madaxweyne Trump ayaa si adag uga hadlayay arrimaha ganacsiga ee Mareykanka iyo Shiinaha
Australia iyo New Zealand ayaa waddamadooda ka mamnuucay inuu ka hirgalo barnaamijka adeegga Internet-ka 5G ee shirkadda Huawei ay ugu talogashay dadka isticmaala taleefannada gacanta.
Balse mas’uuliyiinta Huawei ayaa sheegay in shirkaddoodu ay tahay mid madax bannaan oo maamulkeedu uusan hoos tagin dowladda Shiinaha.
Aasaasaha Huawei Ren Zhengfei oo BBC-da la hadlay bishii Febraayo ayaa sheegay in shirkaddiisu aysan waligeed sameyn doonin arrimo ku saabsan basaasnimo.
Previous articleFarmaajo oo safar deg deg ah ugu ambabaxay dalka Masar
Next articleSIYAASIIN MUCAARAD AH OO SHIR UGA SOCONAYO NAIROBI